Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLevel
ULevel unezimvo eziyi-98 zezinye iindawo.
Uyakonwabela i-ambiance yasekhaya, i-vibe yephondo, indawo esembindini, indawo enkulu kunye namagumbi okulala amahlanu. Unokwenza umbhiyozo wabantu abangama-50 egadini. Iza ne-wifi, i-cable tv, uncedo kukhenketho lwesiqithi kunye nelungiselelo lokuthatha.
Ilungele abahlobo, iintsapho ezinabantwana & namaqela. Likhaya lethu. Sabelana nawe ngayo.
Amagumbi okulala ama-6 apho ama-5 akhona kwiindwendwe (amagumbi okulala ama-3 anesimo somoya kunye nabalandeli, amanye amabini anabalandeli kuphela kodwa abajonganga naliphi na ilanga nanini na emini ngoko ke bapholile). Indlu enemigangatho emibini, inokwamkela iindwendwe ezili-12 ngokukhululekileyo.
Amagumbi okulala asezantsi:
* Igumbi loSapho - 1x ibhedi yokumkanikazi + 2 iibhedi ezingatshatanga (abantwana baya kuyithanda) enefeni (US$20-25 ye-2-4 pax ngobusuku ngabunye)
* Igumbi leAircon - 1x ibhedi yokumkanikazi, isakhelo sebhedi esongwayo esinomandlalo omnye (kwisicelo sebhedi esongezelelweyo kuphela) kunye neAC (US$25 ngepaksi e-2 ngobusuku)
*Igumbi leBhedi eliseBunk - iibhedi ezi-2x zesimbo sokulala esinefeni (i-US$15 yeepaksi ezi-2 ngobusuku)
Amagumbi okulala oMgangatho wesibini:
* I-Aircon Room 1 - 1x ibhedi yokumkanikazi + 1 umatrasi womgangatho omnye (ngesicelo esongezelelweyo kuphela) kunye neAC (US$25 ngepaksi emi-2 ngobusuku)
* I-Aircon Room 2 - 1x queen bed, 1 umatrasi womgangatho omnye (kwisicelo esongezelelweyo kuphela) kunye neAC (US$25 ngepaksi emi-2 ngobusuku)
QAPHELA: Ixabiso elisisiseko le-2 lelinye kuphela kwiGumbi le-Queen eline-aircon kumgangatho woku-1 nowe-2. Iindwendwe ze-3-6 ziya kuba kwiFamily Room kunye nefeni okanye kwi-Queen Rooms ye-2 kunye ne-aircon, ixabiso liya kuba lilongezelelweyo ngomntu ngamnye. Ukubhukisha kuphela ngeendwendwe ezi-7-12 ukuya phambili kuya kuhlaliswa kwindlu yonke kwaye kusetyenziswe onke amagumbi okulala. Ubungasese bakho buya kuqinisekiswa njengoko amanye amagumbi engayi kuqeshwa kwezinye iindwendwe nokuba ubhukisha igumbi elinye kuphela.
Ukuthatha kwisikhululo seenqwelomoya okanye kwisikhululo senqanawa eTagbilaran iyafumaneka simahla ukubhukisha ubusuku obusi-7 nangaphezulu (ayisebenzi kwireyithi ethotyiweyo kakhulu).
*Indawo yokutyela entle yangaphakathi nangaphandle. Ikhitshi esisiseko onokuthi uyisebenzise kunye nomncedisi wokuncedisa.
*Ifriji ekwabelwana ngayo kufuphi nendawo yokutyela.
*Isifudumezisi samanzi ashushu/ishawari (amagumbi okuhlambela ama-2 - enye ikumgangatho ophantsi enye kumgangatho we-2). Igumbi lokuhlambela elongezelelweyo ngaphandle kufutshane nendlela yokuqhuba.
*I-AC kumagumbi okulala ama-3 kunye nabalandeli kwamanye amagumbi.
*I-wifi ye-Intanethi iyafumaneka.
*Igadi entle ekwabelwana ngayo kunye nendawo yangaphandle ukonwabela izitulo zamaplanga kunye neetafile.
**Ukuba amaxabiso abhukisiweyo abandakanya isidlo sakusasa, kulula, kuphekwa ekhaya kunye neendawo: Ikofu, ijusi kunye namanzi, ithowusti, iqanda ngalinye, imveliso yenyama ekhoyo kunye nesiqhamo samaxesha athile.**
Njengoko ucwangcisa iholide yakho, cinga ukuba ukhetha igumbi elincinci lehotele okanye izibonelelo zekhaya leholide labucala. Ngaba uyafuna ukwabelana ngayo yonke into nabaninzi ongabaziyo kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide okanye nabahlobo bakho abambalwa? Ngaba ungathanda ukhetho lokukwazi ukuzilungiselela ukutya kwakho (ukupheka okulinganiselweyo, akukho kupheka kakhulu) okanye ngoncedo oluthile oluvela kubantu basekuhlaleni? Ngaba ungakonwabela ukuba yinxalenye yenkcubeko yakwiiPhilippines okanye ukhetha ukuba ngomnye umkhenkethi? Ikhaya lethu losapho eJagna ayisiyondawo yokuchithela iiholide kodwa sikunika indawo yokuhlala ekhumbulekayo ngexesha lakho leholide.
Unokubhukisha indlu yonke okanye amagumbi ambalwa akhethiweyo ngokukodwa. Igumbi ngalinye liyakwazi ukuhlalisa iindwendwe ezi-2 ngokukhululekileyo kwaye omnye umatrasi unokubekwa phantsi kwindwendwe yesi-3. Igumbi loSapho linebhedi enye yokumkanikazi kunye neebhedi ezi-2 zebhedi enye kumgangatho ophantsi. Inemigangatho emibini, amagumbi okulala ama-3 kumgangatho ophantsi kunye namagumbi okulala ama-2 phezulu aneendawo zokuhlala eziphangaleleyo kunye neendawo zokutyela kunye nethafa lesidlo sakusasa. Ikwanayo negadi eneetafile zomthi kunye nezitulo zokuphumla phantsi komthi wemango. Ikwindawo enesango ukuze usapho lwakho kunye nabantwana bazulazule kukhuselekile kwaye kuyonwabisa.
Ihlalisa abantu abali-12 ngokukhululekileyo okanye ukuya kuthi ga kwi-14 (kunye neebhedi ezongezelelweyo kunye nomatrasi ophantsi) kumagumbi okulala ama-5. (umnini unezinye iipropathi zolwandle malunga nemizuzu eyi-10 yokuqhuba apho amaqela amakhulu anokufumaneka kwaye sinokubonelela ngezothutho ukusuka kwindlu enye ukuya kwenye).
Njengoko ucwangcisa iholide yakho, cinga ukuba ukhetha igumbi elincinci lehotele okanye izibonelelo zekhaya leholide labucala. Ngaba uyafuna ukwabelana ngayo yonke into nabaninzi ongabaziyo kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide okanye nabahlobo bakho abambalwa? Ngaba ungathanda ukhetho lokukwazi ukuzilungiselela ukutya kwakho (ukupheka okulinganiselweyo, akukho kupheka kakhulu) okanye ngoncedo oluthile oluvela kubantu basekuhlaleni? Ngaba ungakonwabela ukuba yinxalenye yenkcubeko yakwiiPhilippines okanye ukhetha ukuba ngomnye umkhenkethi? Ikhaya lethu eJagna ayisiyondawo yokuchithela iiholide kwaye sikunika indawo yokuhlala ekhumbulekayo ngexesha lakho leholide.
Indawo kunye nokuLula
Kumbindi wedolophu yaseJagna, embindini obekwe kufutshane neevenkile, iibhanki, icawa, izibhedlele, iimarike.
UBumelwane obunobuhlobo noKhuselekileyo
Indawo yokuhlala ikhuselekile kwaye inobuhlobo. Akukho kuhola wendlela ngoko akuxakekanga kangako. Ikwakwikhompawundi egayiweyo ngoko ke ubumfihlo buvela ngaphandle.
Idolophu ikulungele ukuhamba, ukubaleka, ukuqubha. Uya kubona abantu balapha abayaziyo impilo behamba, bekhwela ibhayisekile kwaye bebaleka kwangentseni. Abantu balapha banobuhlobo, baya kuncuma baze bathi molweni kodwa baneentloni ukuncokola ngakumbi.
Irenti ye-Scooter iyafumaneka, ziya kuhanjiswa endlwini nge-700 pesos ngosuku. Isaziso sangaphambili siyacetyiswa.
Cela nje uNimfa (umkhathaleli wethu) okanye undithumele umyalezo malunga neendwendwe njl.
Ingcebiso elungileyo kukungena kwiMarike yeJagna ukuze ufumane iziqhamo kunye nokutya. Yimizuzu nje eli-10 yokukhwela ibhayisekile okanye ituktuk. Zama i-BBQ yasekuhlaleni ukuze ufumane into ekhethekileyo! I-lechon manok yiklasi yokuqala (i-BBQ Chicken). Zininzi iziqhamo ezitsha ngeenxa zonke kwaye unokuhlala ufumana amashwamshwam.
IJagna idume ngokuncamathelisa iCalamay eswiti. Ungayindwendwela ivenkile kaCheng kwaye ukuba unethamsanqa banokukunika ikroba lokuba bayenza njani na. Ikwanayo neengxangxasi ezintle, i-Kinahugan falls, malunga nesiqingatha seyure sokukhwela isikuta. I-Jagna Port ikwaneeferi ezikhawulezayo nezicothayo eziya kwiSiqithi saseCamiguin kunye neCagayan de Oro City. Ungacwangcisa uhambo lwakho ukuze uqhagamshelane nezi ziqithi zintle.
IJagna sisiseko esifanelekileyo sokuhlola isiqithi. Ungandwendwela iPanglao Island kunye nolwandle lwaseAlona ngeyure enye kunye nemizuzu eli-15, iinduli zeChocolate kunye namaphandle ngeyure. Ukwakufutshane nendawo engabakhenkethi kangako kodwa intle ngakumbi kwicala leBohol. I-Anda emhlophe elunxwemeni imalunga nemizuzu engama-40 yokuqhuba, i-Can-umantad Waterfalls engqongwe ngamathafa erayisi imalunga nemizuzu engama-50 yokuqhuba. Ukukhwela isikuta ngaselunxwemeni sele kuyindlela ebukekayo. Jonga kwaye ube ngathi ngumntu wasekhaya.
Ukuze ufumane amava okuqubha angaqhelekanga, unokundwendwela ulwandle oludumileyo lwaseAlona lwePanglao Island okanye iWhite Beach yaseAnda, iyure kunye nemizuzu engamashumi amane ukukhwela imoto ngokulandelelanayo. E-Jagna, unokonwabela i-Kinahugan Falls okanye i-Lonoy Cold Spring-zombini zilungile kubathandi bendalo kunye nenye indlela egqibeleleyo kumachibi okuqubha. Idama lokuqubha elikufuphi lifumaneka nge-200 pesos ngomntu ngamnye, elikufutshane limalunga nemizuzu esi-7 yokukhwela imoto.
Ngaba ufuna sikuthathe ukusuka kwisiXeko saseTagbilaran ukuya kwidolophu yaseJagna?
ISikhululo seenqwelomoya/Izibuko lokuThatha kunye nokuLahla:Imoto 1,800; UVan – P2,000
I-tricycle encomekayo ithatha kwizibuko laseJagna okanye kumbindi wedolophu.
Iincwadi zabantwana kunye nengqokelela yezinto ezithengiswa kakhulu ziyafumaneka ukuze iindwendwe zizonwabele.
I-TV ye-Cable ene-flatscreen TV kunye nesitishi sokumisa umculo ziyafumaneka.
Izithuthi zikawonke wonke
Ii-tricycles kulula ukubamba kwindawo ukuya kumbindi wedolophu yaseJagna okanye iibharangi ezingabamelwane. Iibhasi eziya nokubuya eTagbilaran, e-Ubay, e-Anda nakwezinye iindawo zihamba kwindlela enkulu ukusuka nge-5am ukuya kwi-7pm, sinokukulungiselela enye.
Ukuba uhlala ngaphezulu kweveki enye, sinokulungiselela ibhayisekile enamavili amathathu kunye nomqhubi ukuhlalisa idolophu yakho ehlolayo. Singenza amalungiselelo ezothutho kwiindwendwe, ukusuka kwi-tricycle, imoto okanye iveni kunye nomqhubi ngesicelo.
Ukhenketho olukhoyo (kufuneka lulungiswe kwiintsuku ezi-3 phambi kokhenketho).
Umbuki zindwendwe ngu- Level
Uthembekile kwaye wamkelekile
Umnakekeli wendawo (Nimfa) okanye umama wam okanye mna ngokwam ukuba ndisedolophini siya kwamkela iindwendwe xa sifika kwaye uya kuqhagamshelwa ngalo lonke ixesha ngeSMS kunye nomnxeba.
Ndiza kufumaneka ukuba ndiphendule i-sms kunye nee-imeyile ngexesha lokuhlala kodwa andizukubakho ngokobuqu.
Umnakekeli wendawo (Nimfa) okanye umama wam okanye mna ngokwam ukuba ndisedolophini siya kwamkela iindwendwe xa sifika kwaye uya kuqhagamshelwa n…